गृहपृष्ठसमाचारअर्थअन्तर्राष्ट्रियखेलकुदमनोरन्जनअन्तरवार्तासमाजफोटो फिचरसम्पर्क	You are here: Homeसमाजसमाज“मधेशको आन्दोलन एकदम जायज हो” : उज्जवल थापा
Monday, 02 November 2015 21:55	Rate this item
देशमा राजनैतिक अस्थिरता चलिरहेको अबस्थामा पोखरी सफा गर्नको लागि पोखरीमा नै छिर्न पर्दछ भन्ने धारणाका साथ राजनैतिक पार्टी को रुपमा अगाडि आएको बिबेकशील नेपाली पार्टीका अध्यक्ष उज्जवल थापा । अमेरिकामा सुचना प्रबिधि शिक्षा अध्ययन गरी नेपालमै आएर केही गर्ने इच्छा लिएर आउनु भएको उहाँले यहि आफ्नै प्रक्रियाबाट नेपालको राजनितिमा परिवर्तन ल्याउन आफ्नो कदम चाल्नु भयो । त्यही नेपाली युवा तथा राजनितिमा परिवर्तन ल्याउन प्रयासरत युवा उज्जवल थापा संग शुर्दुन बिडारीले गर्नुभएको कुराकानी ः
तपाई IT क्षेत्रको मान्छे अमेरिकाबाट फर्के पछि तपाई राजनितिमा आउन चाहनु भयो । के का लागि राजनितिमा प्रवेश गर्नु भयो ?पहिला सुरुमा त अमेरिकाबाट आउँदा त राजनितिमा लाग्ने इच्छा चाँही थिएन । त्यतिखेर म आफुलाई भेट्टाउनको लागि लािग परेको थिएँ । अमेरिकामा मैले आफुलाई चिन्न सकिरहेको थिइन त्यस कारण म नेपालमा आए । नेपाल आएर पनि म करिव २ बर्ष जति भौतारिए मेरो परिवारले गाली पनि गर्नुभयो । बिभिन्न जिल्ला घुमे पछि IT कै ब्यबसाय गरेँ । त्यही काम गर्दै जाँदा लाग्यो कि म जस्तै अरु युवाले पनि आफ्नो इच्छा अनुसार काम गर्न सके देशमा राम्रो हुन्छ भनेर Entrepreneurs Forum Nepal भन्ने अभियान सुरु गरे तर पछि गएर के भयो भने हामी युवाले जति गर्न खोजे पनि वाताबरण नै बन्दैन रहेछ, किनकी त्यतीखेर सन् २००८ देखि २०१० सम्म बन्द भइराख्ने गर्दथ्यो । त्यस पछि अति भो भनेर म बन्दको बिरुद्धमा निस्कीए तर मलाई राजनितिमा त्यति खेर सम्म पनि म Politics Dirty is Game भन्दै हिड्ने गर्दथेँ र लाग्थ्यो पनि ।अनि त्यसपछि Nepal Unites भन्ने अभियान सुरु गरेँ । यो बिशुद्ध नागरिक अभियान थियो र यसको उदेश्य भनेको नेतालाई जवाफदेही बनाउने र जनतालाई जिम्मेवार बनाउने थियो तर जति गरे पनि एक ठाउँमा सुरु ग¥यो तर अन्य फेरि बाधा आयो । राजनितिक अस्थिरताले नै यस्तो भएकोे हो जस्तो मलाई लाग्यो तर एक मन लाग्यो नराम्रो गर्न खोज्ने त थोरै छन् । सोझा जनता भने धेरै छन् उनिहरु वाताबरण जति बिग्रे पनि सहेर बसिराखेका छन् भन्ने लागेर नागरिकलाई अब जिम्मेबार बनाउन प¥यो भनि नेपाल युनाईट्स भन्ने फोरम खोले, यो सामान्य कुराको साथ हामी अघि बढ्यौ । यहि कामका साथ अघि बढ्दा एउटा कुरा के सिके भने लडाईँ भनेको नेपालमा पहिलो भएर जित्ने होइन कि नथाकेर जित्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो । तर हामी यस काममा थाक्यौँ किनकी हाम्रो आफ्नै आफ्नै अलग पेशा थियो । हामीले धेरै दबाब दियौँ संबिधानको लागि तर संबिधान सभा नै टुक्रेपछि हामी थाक्यौँ । त्यपछि को शनिबार नै अब के गर्ने भन्ने बिषयमा हामी बैठक बस्यौँ । त्यस भेलामा आम नागरिक देखि राजनितिज्ञ सम्म उपस्थित थिए । सबैले आफ्नो बिचार राखे र राजनितिमा इमानदारीता को कमि जनता प्रति जवाफदेहिता नहुदा यस्तो भएको हो भन्ने कुरा आयो । यसरी नै १२ वटा जति शनिबार शनिबार हामी बैठक बस्यौ त्यही कुरा नै निकर्ष निकाल्यौँ । यसरी राजनतिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न राजनिति मै छिर्न पर्छ भनेर अघि बढ्यौ तर जिन्दगीमा राजनितिमा नलागेको मान्छेलाई सुरुमा आँट्न गाह्रो भयो । राजनितिमा लाग्नुको उदेश्य के हो भन्दा नेपालीको इच्छा पुरा गर्ने र त्यस इच्छालाई बुझ्न हामीले देशको १४ वटा ठाँउहरुबाट पद यात्रा सुरु गरि ठाउँ ठाउँमा गएर मानिसहरु संग उनिहरुको इच्छा सोध्दै बुद्ध जयन्तीको दिन लुम्बिनी पुगेर १४ बटै अञ्चलबाट ल्याएको माटो र पानी मिलाएर लुम्बिनीको बगैँचामा बिरुवा रोप्यौँ र त्यतिखेर सपथ लियौँ कि जनताको यहि सपना पुरा गर्ने छौँ भनि अनौपचारीक सुरुवात ग¥यौ । त्यतिखेर नै चुनावको घोषणा भयो त्यो समयमा निर्वाचनमा उठ्ने हाम्रो समुहबाट मात्र ४ जना थियो । क्षेत्र १, ५, ८, ९ बाट उठ्ने मौका पायौ । त्यस पछि हामीलाई उनिहरुले चिन्ह छान्न दियो र ४ जना छलफछ गरि आफुले रोजेको चिन्ह राख्न नपाएपछि सबैभन्दा नराम्रो चुनाब चिन्हको रुपमा हामीले कुकुरलाई रोज्यौ । त्यो निर्बाचन हाम्रो लागि टेस्ट थियो त्यसमा हामी सफल भयौँ । म उठेको क्षेत्रमा म पाचौँ भए पहिलो पटक राजनितिमा लागेर यसरी सफल हुनु आफैमा ठुलो कुरा थियो त्यसपछि हामीले आफ्नो पार्टी दर्ता गरि अघि बढ्यौ यसरी नै मेरो राजनितिक यात्रा सुरु भयो ।
कुनै पनि राजनितिज्ञ फोहोरी हुनुमा उ आफै जिम्मेबार हुन्छ कि उसलाई हेर्ने परिबेश समाजिक परिपार्टीले केही असर गर्छ ? दुईटा कुरा हुन्छ सुरुमा नेता भईसकेपछि कि जनताको सेवक हुन्छु भनेको हो की देशको सेवा गर्छु भनेको हो त्यस्तो समयमा तपाईले अरुलाई दोष गर्न मिल्दैन, नेताले अरुलाई दोष नै लगाउँदैन । नेता त्यस्तो मान्छे हो जसले बझेको हुन्छ कि म नसुर्धे समाज सुर्धिदैन र नेतामा हुने पहिलो गुण इमानदारीता हो त्यसपछि मात्र अरु कुरा आउँछ । यदि तपाईको ३१ गुण राम्रो गुण भयो र एउटा गुण नराम्रो छ भने त्यसले तपाईलाई नराम्रो बनाउन सक्छ । राजनितिलाई पेशा गर्ने मानिसले समाजलाई दोष दिन्छ तर नेतृत्व गर्नेले कहिले पनि समाजलाई दोष दिँदैन । साँच्चिको देशको लागि केही गर्छु भन्ने मानिसले कसैलाई दोष दिन मिल्दैन, नेता बन्ने ब्यक्तिले जित्न मात्र होइन हार्न पनि सिक्नु पर्दछ जस्तो मलाई लाग्छ ।
तपाई अमेरिकामा IT पढेको भन्नुभयो अहिले नेपाली युवाले अमेरिकालाई आफ्नो सपनाको सहरको रुपमा लिईरहेको बेला तपाईले त्यहाँ आफुलाई पाउनुभएन तर नेपालमा के कुराले तपाईलाई यतै केही गर्न प्रेरणा मिल्यो ?मान्छेहरु मेरो बिचारमा समाधान आफुभन्दा बाहिर खोज्छन् जस्तो लाग्छ । यो समाजको परिबेशको नतिजा हो । समाधान आफैभित्र हुन्छ तर हाम्रो मन अशान्त हुनुको कारण हामी आफैले आफैलाई नबुझ्नु हो । त्यतिखेर म आफैलाई बुझ्ने प्रयासमा थिए । अहिलेको परिबेशमा प्राय सबै मानिस बिदेशिने चलन छ यो समाजको कारणले गर्दा भएको हो । मलाई पनि अमेरिका बाट फर्किँदा मेरो बुबा आमाले गालि गर्नुभयो तर पछि बिस्तारै मलाई साथ दिनु भयो । म नेपालमा आउनुको कारण पनि यहाँ केही नयाँ कुरा भेट्टाउन भन्दा पनि आफुले आफुलाई कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भनि आएको हो । हामी नेपाली बिश्वको धनि मानिने देशहरुको बिचमा रहेर पनि आफु उठ्न सकेका छैनौ हामी गरिब नै छौँ त्यसकारण यदि हामी आफ्नो देशलाई समृद्ध बनाउनु छ भने यहि बसेर परिवर्तन गर्नु पर्छ तर हाम्रो धारणा अरुले हाम्रो देश बनाईदिन्छ भनि बसिराखेका छौँ । हामीले देशको लागि समय दिन सकिरहेका छैनौँ जस्तो मलाई लागिरहेको छ । अहिले प्राय नेपालीको दिमागमा DV भरेर अमेरिका जाने होड चलेको छ । यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि हामी नेपालमै बसेर केही गर्नु सक्छौँ त यहि यस्तै कारणले गर्दा बिबेकशिल नेपालीको जन्म भएको हो ।नेपालमा संबिधान बनिसकेको छ त्यतिखेर मधेसमा आगो बलिरहेको थियो यस्तो परिस्थितीलाई बिबेकशिल नेपालीले कसरी लिएको थियो ?संबिधानलाई ब्यबहारमा ल्याउन सकिएन भने त्यो कागजको खोस्टा मात्र हो । संबिधानमा हरेक ब्यक्तिको हक अधिकारको कुरा समाबेश गरिएको हुन्छ । संबिधानमा स्वास्थ्यको हकको कुरा समाबेश गरिएको छ तर त्यहि हकको लागि डा. गोबिन्द के.सी ६ पटक आमरण अनशन बस्न किन प¥यो त ? संबिधानमा लेखिएको कुराको परिपुर्ति गर्नको निम्ति नेतृत्व गर्ने ब्यक्क्तिमा इमानदारिता हुन पर्दछ । त्यसमा लेखिएको कुरा पुरा हुने हो भने यहाँ कुनै समस्या आउँदैन किनकी संबिधान भनेको सुधार गर्नको लागि बनेको हो । अमेरिकाको संबिधानमा पनि ८० बर्षसम्म महिलाले भोट हाल्न पाउने अधिकार थिइन तर उनिहरुले पछि यसलाई सुधार्दै लैजाँदा अहिले अमेरिकाकोे संबिधान बिश्वकै उत्कृष्ट संबिधान बन्न सक्यो । त्यसकारण संबिधान आफैमा राम्रो नराम्रो हुँदैन त्यसलाई कार्यान्वयन र नेतृत्व गर्नेले त्यसलाई राम्रो तथा नराम्रो बनाउने हो । हामीले संबिधान बनाउनेलाई के भन्न चाहन्छौँ भने अब नयाँ नेतृत्वका साथ अगाडि बढेर जान सकेमात्र संबिधान प्रति हामी सकारात्मक हुने छौँ । अब नयाँ नेतृत्वका साथ अघि बढ्नु पर्छ ।
बिबेकशील नेपालीले मधेश भ्रमण पनि गरिसक्योे ,उनिहरु संबिधान प्रति रुष्ट भएर आन्दोलनमा उत्रेका थिए के कुरामा चित्त नबुझेर उनिहरु आन्दोलनमा होमिएको रहेछन् अनि बिकेकशिल नेपालीलकोे आन्देलन प्रति कस्तो प्रतिक्रिया छ ?पहिलो कुरा त मधेस आन्दोलन चर्किनुको कारण भनेको आत्मसम्मानको खोजी हो । यस्तो बिभेदको परिस्थिती त्यहाँमात्र नभईकन हरेक ठाउँमा छ । त्यस आन्दोलन बढाउने अर्थात् आगोमा तेल थप्ने काम भने नेतृत्वकारीले गर्दो रहेछ, चाहे त्यो तराईको नेतृत्व होस् या केन्द्रिय नेतृत्व होस् । अहिलेको संबिधान धेरैले अध्ययन गर्न पाएनन् र पाएकाले पनि त्यसमा आफुले चुनेर पठाएको ब्यक्तिले आफ्नो लागि आबश्यक कुरा समाबेश नगरेकोले यस्तो अबस्था सिर्जना भएको हो जस्तो मलाई लाग्यो ।
त्यसो हुनुमा हामी जनताले राम्रो संबिधान भन्दा पनि छिटो संबिधान चाहियो भन्नु होइन र ?हुनत ८ बर्ष लगाएर संबिधान बनाउँदा जनतालाई हतार त भइहाल्छ नि तर मानिसमा यति बिनम्रता हुनपर्छ कि मलाई जसले चुन्यो मैले उस्को हितको लागि कदम चाल्नु पर्छ । आफु नेता भईसकेपछि जनतालाई समाल्न सक्न पर्दछ । उनिहरु पोजिसनमा पुगेपछि जनतालाई बिर्सिन्छन् । उनिहरु एकपटक पनि आफ्ना जनताको मा पुगेर उनिहरुको इच्छाबारे सोध्न जाँदैनन् । उनिहरु जनताको हक अधिकार भनि हिड्छन् तर कुन हक अधिकार जनतालाई दिलाउनु पर्छ भन्ने कुरा नै नबुझि हिडिरहेका हुन्छन् । यो कुरा बुझ्न २१ औँ शताब्दी सापेक्ष नेतृत्वको आबश्यकता पर्दछ जस्को कमि नेपालको नेतृत्वमा देखिएको हो । त्यसकारण त्यस्तो समस्या तराईमा देखिएको हो यस्तै हो भने यो समस्या पुरा देशमा फैलिन सक्छ ।
तपाई तराई भ्रमण गरिसक्नु भएको मान्छे तराई मधेस पार्टीले आन्दोलन गरिराखेको छ र भारतले पनि यसलाई सहयोग गरिराखेको छ भन्ने कुरा आउँदा अब बिबेकशिल नेपालीले लिने रणनिती के हुने छ ?पहिला कुरा के बुझ्न प¥यो भने मधेस आन्दोलन एकदम जायज हो र यो मधेस कै मानिसले गरेको हो तर यसबाट फाइदा लिने ब्यक्ति भने धेरै छन् । जनताले मात्र आक्रोश पोखेका हुुन् त्यसको फाइदा अरुले लिइरहेका छन् । किन फाइदा लिन्छन् भने असल नेतृत्वको कमि हो । यदि तपाई असल नेता हो भने तपाईले उनिहरुको आवाज बुझि दिनु पर्दछ । किनकी तपाईलाई चुन्ने त उनिहरु हुन् । लिडरले त चुनौतिलाई अबसर बनाउने हो र लिडर बन्न सजिलो छैन । लिडर हरेक कुराको लागि तयार हुन पर्दछ । भुकम्पको समयमा हाम्रो लिडरसिप तयारी अबस्थाको नभएर कति गाह्रो भयो । जनताको साथले यहाँ सम्म आईपुगे जनताको लागि जवाफदेहि हुन जान्नु पर्दछ । त्यसकारण अब हामी जनताको इच्छाअनुसार कसरी बढ्न सक्छौ साथै आफै पुर्व तयारी भएर अगाडि बढ्ने कुरामा बिश्वश्त छौँ । हामी आफै पुर्वतयारी बस्दा कसैले हामीलाई हेप्न सक्दैन ।
तर अन्र्तराष्ट्रिय पारवहन सन्धि त हामीले प्रयोग गरेर अघि बढ्न सक्छौ त्यो चाँही कत्तिको सम्भाबना छ त ?मैले भनेको यदि तिमी कमजोर भईसकेपछि नियमले पनि काम गर्दैन । कानुन बलियो हुनलाई तिमी पनि बलियो हुन पर्छ । कानुन ठिक र बेठिकले मात्र चल्दैन के सम्बन्ध पनि राम्रो हुन प¥यो । समस्या परेर त्यस्तो परिस्थिती आउनु भन्दा पनि त्यस्तो परिस्थिति नै आउन नदिन हामी तयार हुनु पर्दथ्यो जस्तो मलाई लाग्छ । हामीले हक खोज्नु भन्दा पनि हामीले यसलाई कसरी लगेका छौँ भन्ने सोचौँ के । हामी अझै अरुको भर पर्नु भन्दा पनि आफु अघि बढ्नको लागि सोचौँ र यो परिस्थितीलाई चुनौतीको रुपमा लिएर अघि बढ्यौ ।
भारतले गरेको प्रेट्रोलियम पदार्थ तथा अन्य कुरा आपुर्तिमा रोक लगाए पछि नेपालले आफ्नो अर्को मित्र राष्ट्र संग पनि हात बढाउने कार्य गरिराखेको छ । तर हिजै भारतले आफ्नो असन्तुष्टी जनाईसक्यो यस्ले समग्र नेपालमा झन् कस्तो असर गर्ला ?जबसम्म हामी नेपालीले ठिक नेता चुन्दैनौ तब सम्म् हामी अरुको आधारमा चल्नु पर्ने हुन्छ । भारतलेमात्र अरु संग हात नबढाउ भनेको त हो नि । हामी गरिब देशमा गनिन्छौँ । यस्को कारणले हाम्रो देशमा धेरै समस्या बढेको देख्दछु । अब यस्तो समस्या समाधान गर्न त हामीले सहि नेतृत्व गर्ने ब्यक्ति चुन्नु पर्दछ । साथै हामी देशको सेवा गर्ने भन्ने धारणा पनि हुनुपर्छ हामी खाली सामाजिक सञ्जालमा मात्र देश भक्तिको कुरा गरेर देशप्रतिको बिचार स्पष्ट हुदैन । हामी नयाँ नेतृत्व चुन्ने कि बन्ने भन्ने कुरामा आफु बिश्वासिलो हुनुपर्छ हामी आफुले आफ्नो मानसिकता परिवर्तन गरेनौ भने यो त भर्खर सुरुवात हो भनि बुझे हुन्छ ।
कुनै योजना बन्दै गर्दा राजनितिक पार्टीको लिडर मात्र नभई कर्मचारी बर्गको पनि ठुलो हात हुन्छ जस्तो लाग्छ के उनिहरु बिचको तालमेल मिलेको छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?समस्या नभएको क्षेत्र नै छैन तर समस्या समाधानको लागि त लाग्नु प¥यो नि कर्मचारी भनेको हात खुट्टा हो तर मुख्य दिमाग भनेको त राजनिति नै हो यस्तो अबस्थामा मुख्य नियन्त्रण गर्ने दिमाग नै सहि छैन भने अरु कसरी सहि हुन सक्दछ । अहिले को केन्द्रिय राजनिति पनि समय सापेक्षिक भएन जस्तो लाग्छ । २१ औँ शताब्दीमा पनि २० औँ शताब्दीको परम्परामा राजनिति गरेर हुँदैन ।
तर अहिले नेपाली पुस्तामा हामी दुख सहन्छौ तर झुक्दैनौ भन्ने जोश देखिएको थियो नि यो त सकारात्मक पक्ष हो नि ?यो जोश फेशबुक र बोलीमा मात्र भएर हुदैन ब्यबहारमा पनि लागु हुनु पर्छ त्यो ब्यक्तिलाई गएर सोध्नु कि तपाईले समाजको लागि के गर्नुभयो । म त्यस्तो युवालाई सानो सानो काम बाट थालनी गर्नु भन्न चाहन्छु । फेसबुकमा लेख्नु नराम्रो त होइन त्यो त मात्र पहिलो कदम हो । देशभक्ति भनेको सुरुमा चेतना आउनु हो । दोस्रोमा त्यो चेतनालाई ब्यबहारमा ल्याउनु पनि हो । मानिस राम्रो बर्ग हो तर समाज तथा अन्य कारणले उसमा बिष भरिएको हुन्छ । अहिले त्यो बिष निकाल्ने काम भईराखेको छ । अब अमृत निकाल्ने काम सुरु गर्नु पर्दछ ।
तर महाभुकम्पको बेलामा युवाले जनता प्रति देखाएको क्रियाशिलता देशभक्ति होइन र ?महाभुकम्पको बेलाको देशभक्ति ब्यबहारमा देखिएको थियो । त्यति बेला १७ जिल्लाका युवा नदेखिएको भए फेसबुकमा मात्र ध्भ ल्भभम त्य म्य त्जष्क भनेर बसेको भए तपाई त्यस्ता युवालाई धेरै घृणा गर्नुहून्थ्यो होला । त्यतिखेर हामी पनि उद्धार कार्यमा हिड्दा युवा क्रियाशिलता देख्दा युवामा सम्भावना छ भन्ने लाग्यो तर तिनिहरुलाई एउटै डोरीमा बाँधेर लानु जरुरी छ जस्तो लाग्यो । भुकम्पमा राम्रो काम भयो सबैले राम्रो भने तर त्यस्को बिश्लेषण गर्दा नेपालले देश बनाउन सक्छ त्यो प्रमाणित भयो तर कुन बेलामा सक्छन् भन्दा जब समाज भताभुङ्ग भाको छ त्यस्तो समयमा र देशको शासक हराएको बेलामा मात्र नेपाली युवा अघि आउँछ तर त्यहि समाज र शासक हाबी हुदाँ उनिहरु आउन सक्दैनन् । त्यसकारण नेपाल फेरि बन्नको लागि शासक परिवर्तन हुनु पर्छ र समाज बिबेकशिल हुन पर्दछ ।
अब बिषय मोडौ अब देशमा चुनाव पक्कै पनि हुन्छ त्यो चुनावमा हामी नेपाली जनताले बिबेकशिल नेपालीलाई ७५ वटै जिल्ला बाट उम्मेदवारीको रुपमा देख्न पाउँछौ ?हाम्रो बिस्तार हामीर्ला जनताले दिने साथमा भर पर्दछ । किन भन्दा खेरि हामीले बाटो बनाईदिने हो । त्यस बाटोमा कति मानिस ला्ग्ने त्यो उनिहरुमा भर पर्ने कुरा हो । अब निर्बाचन हुँदा कतिले हामीलाई साथ दिने त्यो साथ तथा सहयोगमा भर पर्ने कुरा हो । जस्तै हामी पोखरीमा पानी भर्दै छौँ अब त्यस्मा कति जना पौडिन आई सक्षम भई निस्कन्छन् , त्यस्ले जित्ने हो राम्रो मान्छे आए ७५ जिल्ला पनि सामान्य हुन्छ तर राम्रो मान्छेको कमि भए १ जिल्ला पनि म्स्किल हुन्छ ।
अब युवालाई एकिकृत गरि लैजान बिबेकशिल नेपालको भुमिका कस्तो रहन्छ ?बिबेकशिल नेपाल बनेको नै त्यस्ता युवकलाई संगठित बनाई लैजानको लागि हो चाहे त्यो भुकम्पको समय होस् या अन्य कुनै समयमा होस् । हामीले मधेशमा पनि सञ्जाल बनाईरहेका छौ कि त्यहा पनि युवालाई संगठित बनाई सहि बाटोमा लान सकुन् । बिबेकशील नेपाली देश समाजको लागि केही गर्ने ब्यक्तिको लागि र जो आफै परिवर्तनको बहाक बन्न चाहन्छ उस्को लागि प्लेटफर्म हो । अब देशमा काम गर्ने बाताबरण चाहिँ बिबेकशिल नेपाली ले गर्दछ । चाहे त्यो देशमा नेतृत्व गरेर हुन्छ या अन्य अवसर सिर्जना गराएर हुन्छ हामी अघि बढ्ने छौ ।
बिबेकशील नेपाली एउटा देश समृद्ध बनाउन स्थापित पार्टी अब देश बनाउन यस्ले कस्तो कदम चाल्ने छ ?हाम्रो सोच कस्तो छ भने हामीले ८ खम्बा भनि सिद्धान्त बनाई अघि बढेका छौ । त्यही ८ खम्बालाई बलियो बनाउन हामी लाग्ने छौँ । युवा राजनिति सुधार मुखि हो त्यसलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने छौँ । त्यहि भएर हामीले गरेका हरेक कार्यले जनता जिम्मेबार हुन्छ बिबेकशिल हुन्छसाथै नेतृत्वलाई इमानदार बन्ने छ भन्ने आशाका साथ अघि बढ्ने छौ ?
अन्त्यमा हामी जस्ता युवालाई बिबेकशिल नेपाली र हजुरको ब्यक्तिगत तर्फबाट के भन्न चाहनु हुन्छ ?पहिला त तपाईहरु सबैलाई एउटा प्रश्न छ । नेपाली भन्ने कि नेपाली बन्ने अनि दोस्रो कुरा बिकल्प कुर्दै बस्ने कि आफै बन्ने र राजतिनिलाई ब्यबहारमा ल्याउनको लागि नव पुस्ता आफै अगाडि बढ्नुस । यस्का साथै देशमा परिवर्तन ल्याउन तपाई आफै परिवर्तनको संवाहक बन्नु र आफ्नो देश आफै बनाउनुस् यहाँ बुद्ध, मण्डेला र गान्धी जन्मिदैनन् ।	Read 4653 times	Tweet
« पहाड–मधेश दोस्ती-चन्द्रकिशोर मधेशी सच्चा राष्ट्रवादी र देश भक्त -साहित्यकार संग्रौला »